ကျန်းမာရေး Archives •
သွေးတိုးကျစေဖို့အတွက် စားသုံးသင့်သော အစာအစားများ
14/12/2019 Yan Naing 0
သွေးတိုးကျစေဖို့အတွက် စားသုံးသင့်သော အစာအစားများ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်နေတာကို ပြန်လည်လျော့ချဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ ဆေးဝါးတွေသာမက အစားအစာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သွေးတိုးရောဂါဟာလည်း အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဗဟုသုတရစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်များများစားပါ အငံဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေတွေအများကြီးကို ထိန်းထားသလိုဖြစ်စေပါတယ်။ Continuous reading
ဆောင်းတွင်းမှာ သင်ဟာ သူများတွေထက် ပိုချမ်းနေတယ်ဆိုရင် သတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
13/12/2019 Yan Naing 0
ဆောင်းတွင်းမှာ သင်ဟာ သူများတွေထက် ပိုချမ်းနေတယ်ဆိုရင် သတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက် လူတိုင်းဟာ အပူနဲ့ အအေးကို ကွဲပြားခြားနားစွာခံစားရပေမယ့် တချို့လူတွေက သူများနဲ့မတူဘဲ အချိန်တိုင်းအေးသလိုခံစားကြရပြီး အအေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိကြပါဘူး။ အခုလို ဆောင်းရာသီဆို ပိုဆိုးပါတယ်၊ သာမန်သူတွေချမ်းတာထက် ပိုချမ်းနေတက်တာမျိုးပါ။ သင်ဟာ အဲ့လိုလူမျိုးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Continuous reading
10/12/2019 Yan Naing 0
“ရောဂါပေါင်း (၁၀၁)မျိုးကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ရဲယိုသီးရဲ့ အံ့မခန်းအစွမ်းနဲ့ အသုံးပြုပုံများ” ရဲယိုသီး ကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေ အမြဲ စားသုံးလေ့ ရှိတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ။ ရဲယိုပင်က ရှားပါးတဲ့ အပင်မျိုး မဟုတ်ပဲ နေရာ ဒေသတိုင်းမှာ ပေါက်ရောက် နိုင်လို့ အပင်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် Continuous reading
07/12/2019 Yan Naing 0
နှာပိတ်ခြင်း ၊ နှာရည်ယိုခြင်း ရင်ကြပ်ခြင်းတို့ အတွက် အစွမ်းထက် ဆေးနည်း ဆောင်းတွင်းမှာ အဖြစ်များနေလို့ တဆင့် ပြန်ပြီး မျှ ဝေပေးစေချင်ပါတယ် ။ “ နှာ စေး ၊ နှာပိတ်၊ ရင် ကြပ် ခြင်း အ တွက် Continuous reading
တင်းတိပ်အတွက် စိတ်မညစ်ရစေဖို့ သဘာဝ ဆေးနည်း
06/12/2019 Yan Naing 0
တင်းတိပ်အတွက် စိတ်မညစ်ရစေဖို့ သဘာဝ ဆေးနည်း မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်မညစ်ရအောင် သဘာဝနည်းနဲ့ ကုမယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်ညစ်နေလျှင် အောက်ပါ သဘာ ဝဆေးနည်းများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ (၁) ဒန္တသုခဆေးပင် အရွက်စိမ်းကို ကြိတ်၍ သနပ်ခါးနှင့်ရောစပ်ကာ ညအိမ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း တင်းတိပ်ပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။ Continuous reading
ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်လျှင် ငွေမကုန် လက်တွေ့ပျောက်နည်း
04/12/2019 Yan Naing 0
ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်လျှင် ငွေမကုန် လက်တွေ့ပျောက်နည်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အင်္ဂါများတွင် ကျောက်တည်သည့်ရောဂါမှာ ကမ္ဘာဦး အစကပင် ရှိသည့် ရောဂါဟု ဆိုနိုင်သည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိရသည့် မံမီရုပ် အလောင်းအတွင်းတွင် ကျောက်တည်မှုကို တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ကျောက်တည်ခြင်းသည် သည်းခြေအိတ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းတို့တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်ကပ်၊ Continuous reading
03/12/2019 Yan Naing 0
လေဖြတ် လူနာများသို့ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ဆေးနည်း လေးပါ ။ လုံးဝ ပြန်ကောင်း ပါ တယ် လေဖြတ် လူနာများသို့ ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ ဆေးနည်း လေးပါ လေဖြတ် လူနာများသို့ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ဆေးနည်း လေးပါ ။ လုံးဝ ပြန်ကောင်း ပါ တယ် ဆေးပရုပ် Continuous reading
29/11/2019 Yan Naing 0
မနေ့ညက လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ( ရှယ်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးပါ … ) ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်နော် … ။ မနေ့ညက လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာ ပြီးတော့ပြောင်အောင်သဘက်နှင့်သုတ်လိုက်တယ် ဒူးအောက်ကနေ ရေနွေးလေးနဲ့ Continuous reading
ဆီးချို သွေးတိုးတို့ကို ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစွာနဲ့ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်းကောင်း…..
27/11/2019 Yan Naing 0
ဆီးချို သွေးတိုးတို့ကို ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစွာနဲ့ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်းကောင်း….. တစ် က မ္ဘာ လုံး သိ အောင် ဖြန့် ဝေ ပေး ကြ ပါ ။ ကိုယ် တိုင် လက် တွေ့ ရော ဂါ ပျောက် Continuous reading
အ ဖု အ ကျိတ် အ ပူ ကျိတ် ပြည် တည် ကျိတ် ကင် ဆာ ကျိတ် ရှိ သူ များ ဇီ ဇ ဝါပန်း အ စွမ်း ….
26/11/2019 Yan Naing 0
အ ဖု အ ကျိတ် အ ပူ ကျိတ် ပြည် တည် ကျိတ် ကင် ဆာ ကျိတ် ရှိ သူ များ ဇီ ဇ ဝါပန်း အ စွမ်း …. ဇီ ဇ ဝါ Continuous reading
Total Hits : 1239153